बिहेको पहिलो रात मात्रै होइन श्रीमानले मलाई कहिल्यै छोएनन् , म के गरु ? – Life Nepali
बिहेको पहिलो रात मात्रै होइन श्रीमानले मलाई कहिल्यै छोएनन् , म के गरु ?
काठमाडौँ -मेरो विवाहको पहिलो रात थियो । म पहिलो रा’त कुनै पुरुषसँग अन्तरङ्ग हँुदै थिएँ । नजिकका साथीहरुसँग भएका कुराकानी र हेरेका पोर्न भिडियोले मेरो दिमागमा सपना र इच्छाहरुका कैयौँ तस्बिर बुनेको थिए । हातमा दूधको गिलास लिएर टाउको झुकाएर जब म मेरो सुत्ने कोठामा गएँ । त्यति बेलासम्म सबै सोचे अनुरुप नै थियो ।तर मलाई के थाहा थियो र त्यो रातले मेरो जीवनमा यति ठूलो उतारचढाव ल्याउने छ । मेरा श्रीमानले मलाई कसेर अँगालो हाल्नेछन्, म्वाई खानेछन् र रातभरी मलाई माया गर्छन् भन्ने सपना सजाएर जब म कोठामा पसेँ वास्तविकता त्योभन्दा भिन्न उनी पहिले नै सुतिसकेको थिए ।
म ३५ वर्षसम्म कुमारी नै थिएँ, श्रीमानले मेरो अस्तित्व नस्विकारेकोमा मलाई सारै दुःख लागेको थियो । कलेजका दिनहरुमा मात्र होइन, अफिसमा पनि मैले कैयौँ केटाकेटीहरुबीच गहिरो मित्रता देखेकी थिएँ । उनीहरु आफ्ना पार्टनरका काँधमा आफ्नो टाउको राख्थे । हात समातेर घुम्थे । म मेरो पनि त्यस्तै कोही साथी हुनेछ भनेर सोच्थेँ । हाम्रो ठूलो परिवार थियो । चार भाइ, एक बहिनी र बूढा आमाबुबा । यत्रो परिवार हँुदा पनि मलाई सधैँ एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो । मेरा सबै भाइबहिनीको विवाह भइसकेको थियो ।
उनीहरुको आआफ्नो परिवार थियो । मेरो उमेर बढेसँगै उनीहरु कहिलेकाहीँ मेरोबारे वास्ता गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो । मेरो मनमा पनि माया गर्ने इच्छा थियो तर यी सबै कुरा मेरो कल्पनामा मात्र थियो । मलाई कहिलेकाहीँ मोटी भएका कारण हो कि मलाई कसैले नहेरेको भन्ने लाग्थ्यो । के पु’रुषहरू मो’टी केटी मन पराउँदैनन् रु के मेरो परिवार मेरो शा’रीरिक तौलका का’रण मेरा लागि जीवनसाथी खोज्न असफल भएको हो त रु के म सधैँ एक्लै रहने छु रु मेरो मनमा यस्ता प्रश्नहरु खेलिरहन्थे ।-प्रभा ठाकुर-तस्बिर आकर्सणको लागी गुगल बाट साभार गरियको हो।
थप – विवाहको पहिलो रात …(सु’हागरा’तमा )….
श्रीमान श्रीमती बीच एउटा शर्त भयो …. कि जो सुकै आओस कसैलाई ढोका नखोलिदिने । त्यही रात केटाको बा आमा आफ्नो छोरालाई भेट्न भनी कोठामा आए । ढोका ढकढक्याउदा उनिहरु श्रीमानले श्रीमतीको अ’नुहार हेर्यो दुवै मुखामुख गरे तर छो’राले ढोका खोलेन भित्रबाट नै गफ गर्यो किनकि उ चाहादैन थियो श्रीमतीको मन नदुखोस र वचन पनि नतोडियोस । बा आमा बाहिरबाटै गफ गरेर फर्किए ।
केही बर्षमा उनीहरुको जु’म्ल्याहा छो’रा ज’न्मिन्छन । परिवार खुब खुसी हुन्छ । पुनः केही बर्षमा छो’री ज’न्मिन्छे । बुबा अत्याधिक खुशी हुन्छ । खुशी थाम्न नसकेर गाउँलेलाइ भोज खुवाउँछ । श्रीमती अचम्ममा पर्छे र सोध्छे छोरा जन्मदा चाहिँ वास्ता गर्नु भएन छो’री ज’न्मँदा चाहिँ किन यो भोज ? श्रीमानले जवाफ दिन्छ ” यही सन्तान हो जसले मलाई कु’नैदिन ढो’का खो’ल्दिनेछे । ” त्यसैले……….छोरी भा’ग्यमा’नीको नसिबमा मात्र हुन्छ। ..
Previous धनी राष्ट्रको पाहुना आउँदा रातारात हुँने काम अरु समयमा किन हुँदैन ? भीमार्जुन
Next २४ वर्ष मै सिउँदो पुछिएकी देवीले जुत्ता सिलाएर बनिन सेलिब्रेटी, सबैले सम्मान स्वरुप सक्दो सेयर गरौ !